INGUMHUNTSHO ONGAKAJWAYELEKI I-VW CC | Isolezwe
INGUMHUNTSHO ONGAKAJWAYELEKI I-VW CC
Isolezwe / 16 August 2012, 2:12pm /
INGUHUNTSHO ongakangeni khaxha, ngoba awujwayelikile emigaqweni yakuleli. Kwezokucwepheshe uzodela ngoba bayihlinzeke ngokuningi kwa-VW.
IMOTO: VW CC
UMA ngicabanga nge VW CC ngifikelwa izikhathi zakudala zemidlalo yomoya emsakazweni lapho kwakuthi uma kuchazwa imoto ichazwe njengohuntshu bese kukhulunywa ngomnikazi wayo kuchazwe indoda eyingqomondo elishiyile igabadi. I-CC okuyindlela ebizwa ngayo ingena khaxa kulesi sigaba.
Noma isicela kwemithathu iminyaka yethuliwe i-VW CC kodwa njalo uma ngisondela eduze kwayo kimina kuhlale kuyimoto entsha.
Lokhu ngikusho ngoba namanje lezi zimoto zibaliwe emgwaqeni. Emuva kokuba ngingazange ngiphumelele ukuhambela umsebenzi wokwethulwa kwayo, kwa VW SA benze ufefe lokusinika ithuba lokuvivinya le moto izinsukwana. into ebengifuna kakhulu ukuyizwa nokuyithola ukuthi yini eshintshile kulo mhlobo we CC. Ngikuphawulile ukuthi ingaphambili nengemuva layo lihlelwe kabusha.
Into eqapheleka kuqala uma uyibheka wukuthi i-grille igqize nge chrome, namalambu ama-bi-xenon akwazi ukujika nemoto uma ihamba emakhoneni kanti nebhuthi sebeyenze kabusha.
Kulokhu obhampa bathe ukushintsha bagqiza ngombala ofana nowemoto abakubiza nge-colour coded.
Izicabha zayo eziwumtshumo ezingenayo iframe abazange bazishintshe kodwa imoto yonke isibukeka ngendlela ehlukile ezinhlangothini.
Okunye abakushintshile amalambu angemuva nawo asehambisana neLED okwenza ahlale isikhathi eside.
Indlela ehlukile abukeka ngayo la malambu enza i-CC ukwazi nokuyibona kahle ngisho nasebusuku.
Ama-indicators sebewakopelise ezibukweni, ezinhlangothini okungenye yezindlela ezihambisana nezokuphepha.
Ubude bale moto bungu- 4,802 mm bese kuthi ukuya phezulu kube ngu-1,417 mm okuzishoyo ukuthi iwuhuntshu. Kwa- Volkswagen abagcinanga nje ngokubhekelela ingaphandle kuphela kodwa nangaphakathi bazinike isikhathi beyihlela.
Selokhu yethulwa itholakala nezihlalo zohlobo lwe-ergonomic sport ezakhiwe ngendlela yokuthi abagibeli bangasheshi ukuzwela ukukhathala uma behamba ibanga elide ngemoto.
Ungakwazi ukuthola ama-sport seats ahambisana ne-climate control kodwa atholakala kuphela kwi V6 FSI. Uma i-seat climate iqala ukusebenza, kuba khona umoya opholisayo oza uqhamuka ngaphansi
Ngemuva ikwazi ukuhlala abantu abathathu. Uma uyibheka ngaphandle ibonakala iqoqene yaba ncanyana kodwa uma usungena ngaphakathi inesikhala esikhulu.
Iphuma ne-panoramic sunroof okhakhayini evuleka ize iyoshaya emuva ukwazi ukubuka isibhakabhaka ube ushayela.
Phakathi ku-dashboard kunezindawo ezimbili zokubeka izimpahla zakho okuyinto entsha.
Enye into entsha kule moto iClimatronic control. Okunye okutholakala okokuqala asebekwenze ngcono amawindi akwazi ukubamba umsindo ne-Fatigue detection okuwubuchwepheshe obukwazi ukuhlola isimo sokukhathala kumshayeli.
Enye into ehambisana nobuchwepheshe besimanje kule CC i-towbar yakhona esebenza ngogesi. ngokuciphiza nje ibhathini i-towbar iyaziphumela.
Ziningi ezinye izinto ezitholakala kule moto eziphuma nayo njengamasondo angu-17 inch aphuma nerimu lakhona, izihlalo ezingama sport seats, i-‘Auto-hold’ function, ne Hill start assistant, LED rear lights, LED licence plate illumination, fatigue detection system, ubuchwepheshe bokuhlola umoya emasondweni kanye nomsakazo odlala ama CD nezipikha eziyisithupha.